Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche Design: Iinkcukacha kunye neXabiso | I-Androidsis
Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche yoyilo: Iselfowuni yenze ihotele
UEder Ferreño | | Huawei, Iiselfowuni
Umnyhadala wentetho yeHuawei Mate 20 usishiya nezinto ezintsha. Ukongeza kwiimodeli ezimbini eziqhelekileyo ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu, apho sithethile nawe apha, uphawu lubonisa imodeli ngokudibeneyo nePorsche. Sele kulisiko ukuba usebenze nenkampani yeemoto kwaye Basishiya nale Huawei Mate 20 RS Porsche Design, ebonakala njengeyona fowni intle yohlobo.
Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche sisixhobo esithi ithatha uninzi lweempawu kwi-Mate 20 Pro, kodwa kuyilo olwahlukileyo, ngakumbi ngakumbi kubunewunewu. Ke ngokungathandabuzekiyo iya kuvusa umdla phakathi kwabo bafuna into ebiza kakhulu kwaye ikhetheke. Yintoni esinokuyilindela kwesi sixhobo?
Kukwizinto ezisetyenziswa apho ifowuni iphakama khona. IHuawei nePorsche bafuna ukugqithisa umfanekiso wobunewunewu, ubuhle kunye nokuzikhethela Ngale nguqulo yesiphelo sayo esiphakamileyo. Into abayenzileyo, njengoko sinokubona kuyilo lwesixhobo. Sikushiya kuqala ngeenkcukacha zayo ezipheleleyo.
1 Ukucaciswa kweHuawei Mate 20 RS Porsche Design
Ukucaciswa kweHuawei Mate 20 RS Porsche Design
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiHuawei Mate 20 RS Porsche Design
Umzekelo Mate 20 RS Idrafti yoyilo
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 ene-EMUI 9.0
Isikrini I-6.39-intshi ye-OLED enesisombululo se-QHD + kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo IHuawei Kirin 980
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128 GB (iyandiswa ngamakhadi eNMCard)
Ikhamera esemva I-40 + 20 + 8 MP eneeferches f / 1.8 f / 2.2 kunye f / 2.4 Isibane se-LED
Ikhamera yangaphambili MP eyi-24 ene-f / 2.0
Conectividad I-GPS ye-Bluetooth 5.0 ye-USB Type-C Wifi ac kunye ne-LTE Cat 21
Ezinye izinto Iscreen seminwe yeminwe yokujonga iminwe IP68 isiqinisekiso sobuso be-HiVision 3D yobuso
Ibhetri I-4.200 mAh ene-40W yokutshaja ngokukhawuleza kunye ne-15 W engenazingcingo
Ixabiso 1695 kunye nama-2095 euros
Umva wesixhobo ngowona ophambili kuwo. Uyilo lwayo, inkampani isebenzise iglasi nolusu. Siyayibona indlela umxube wezinto ezimbini ezenza ukuba yahluke ngokukodwa kwiimodeli ezisezandleni zenkampani kulo msitho. Ikunika inkangeleko ebukeka ngakumbi kwaye intle kakhulu. Baye bakhuthazwa kuyilo lweemoto ezibalekayo ukuyila uyilo lwe-Huawei Mate 20 RS Porsche Design, njengoko kuchaziwe ligama laseTshayina kulo msitho.
Ukongeza, kufanele kuqatshelwe ukuba isikhumba esisifumana ngasemva kwesixhobo senziwe ngesandla. Indibaniselwano yeglasi, isinyithi kunye nolusu sele ikwenzile ukugqibezela isixhobo malunga noku. Konke oku kukufumana ukugqitywa okunqwenelekayo kunye nesiphumo esifunwayo ngamacala omabini.
Kwinqanaba lenkcazo akukho mahluko kwi-Mate 20 Pro. Umphezulu woluhlu lomgangatho ophezulu, eneenkcukacha ezifanelekileyo kunye neekhamera ezizezona zibalaseleyo kwintengiso namhlanje.
Njengoko unokuthelekelela, sijamelene nohlobo lolona luhle kakhulu kuluhlu oluphezulu. Ke ixabiso layo aliyi kufikeleleka konke konke, ebiza kakhulu kune-Mate 20 Pro.Khumbula ukuba esi sixhobo sisungulwe ngexabiso le-1049 euros, egqitha kolu hlelo lukhethekileyo ngokudibeneyo nePorsche. Nangona oku kungothusi mntu.
Sifumana iinguqulelo ezimbini ze-Huawei Mate 20 RS Porsche Design ngokubhekisele kugcino. Kukho inguqulelo ene-128GB yokugcina kwaye enye ine-256GB yokugcina. Ke siya kuba nethuba lokukhetha phakathi kwezi zimbini. Ngamnye kubo enexabiso, esele iqinisekisiwe ngumenzi. Amaxabiso ngala:
Inguqulelo ene-8/128 GB: i-1695 euro
Inguqulelo ene-8/256 GB: i-2095 euro
Njengoko ubona, ayifikeleleki konke konke, eyona nguqulelo yayo ibiza ngaphezulu kwe-2.000 euros. Ixabiso abambalwa abazimiseleyo ukulihlawula, nangona kukho amaqela abathengi anomdla kakhulu kule Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche. Malunga nomhla wokukhutshwa kwayo, kulindeleke ukuba ikhutshwe ngokusesikweni nge-16 kaNovemba. Kungaphelanga nenyanga iya kufumaneka kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche yoyilo: Iselfowuni yenze ihotele
I-Huawei Mate 20X: Imidlalo yokudlala yeHuawei
IHuawei Watch GT yiwatchwatch entsha ngaphandle kwe-Android Wear